Xildhibaano 'loo diiday' inay galaan xerada Afisyoone - Caasimada Online
Home Warar Xildhibaano ‘loo diiday’ inay galaan xerada Afisyoone
Muqdisho (Caasimada Online) – Xiiisad xoogan ayaa weli ka taagan aagga Teendhada Afisyoone oo lagu wado in maanta lagu qabto doorashada guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya iyo ku xigeennadiisa 1-aad iyo 2-aad.
Doorashada oo ka daahday in la bilaabo waqtigii lagu ballamay ayaa waxaa lasoo warinayaa in weli xildhibaannada qaar aysan gaarin hoolka doorashada, oo loo diiday inay dhaafaan baraha kontorool.
Xildhibaan Maxamuud Cabdiraxmaan Beene Beene oo qoraal soo dhigay bartiisa Facebook-ga ayaa shaaca ka qaaday in isaga iyo xildhibaano kale oo ku sii socday goobta doorashada ay ciidamo Boolis ah ku celiyeen irdihii laga galo garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde.
“Ciidamada Police ka ayaa si fowda ah irdihii laga galayey Aden Cadde Airport gabi ahaanba diiday in xildhibaanadu tagaan teendhadii doorashada gudoonka golaha shacabka ka dhici lahayd,” ayuu ku yiri qoralka uu soo saaray Xildhibaan Maxamuud C/raxmaan Beene Beene.
Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in arrintan ay ka dambeyso Villa Soomaaliya, gaar ahaan maamulka hayey hoggaanka dalka, shantii sano ee lasoo dhaafay.
“Mas”uuliyad daradii dalkeenna hogaan kiisa haysatay shantii sano ee lasoo dhaafay ayaa khaatumadeedii kusii guda jirnaa,” ayuu sii raaciyey xildhibaanku.
“Insha Allaah sadaxda isbuuc ee soo socota hogaan kaan fowdada ah idim Alle dalka wuu kabaxayaa oo doorashada ayaa xalineysa. Hala dulqaato, halaysku sabro, maalmihii wacnaa, demoqaraadiyaddii iyo hogaankii dadka isku wadi jiray baa inoo bilaaban doona Insha Allaah” ayuu markale qoraalka ku yiri Beene Beene oo lagu soo doortay Beledweyne.
Dhinaca kale, ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa Caasimada Online u sheegay in qaar badan oo ka mid ah xildhibaanada ay hadda dib usoo laabteen, ayaga oo ku sugan hoteelka Jazeera iyo hoteellada kale ee ka agdhow garoonka.
Si kastaba, waxaa jira tiro xildhibaano ah oo gudbay, mana cadda inta ay le’eg tahay tiradooda iyo haddii ay ku filan yihiin inuu qabsoomo kulanka maanta.
Waxaa weli jirta rajo ah in la qabto doorashada guddoonka Golaha Shacabka, waxaana goordhow Wariyeyaasha loo ogolaaday inay gudaha u galaan hoolka Afisyoone si ay doorashadaas ugu soo tabiyaan dadka Soomaaliyeed ee la socda.